यस्तो छ प्रस्तावित संविधानको खाका « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » समाचार » यस्तो छ प्रस्तावित संविधानको खाका
यस्तो छ प्रस्तावित संविधानको खाका
२०७२ असार ९, जागरण मिडिया सेन्टर ।
यतिबेला संविधान निर्माणको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्था नरहेपछि दलहरु द्रुतमार्गबाट संविधान बनाउने अभियानमा लागेका छन् ।
संविधानको मस्यौदा लेखनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाअन्तर्गतको मस्यौदा समितिले मस्यौदाको एकीकरण गर्ने र विवाद मिलाउने जिम्मेवारी कार्यदललाईदिएको छ ।
संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला तपाइँ–हामीलाई अब बन्ने संविधान कस्तो होला ? भनेर जिज्ञासा लाग्नु स्वभाविक नै हो ।
हामीलाई प्राप्त संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको मुख्य अंशमा ३५ भाग रहेका छन् भने ३ सय १२ धारा रहेको छ । प्रस्तावित संविधान ९९ सय पृष्ठको रहेको छ ।
संविधानको पहिलो भागमा ‘प्रारम्भिक’ राखिएको छ, जसअन्तर्गत धारा १ देखि ९ सम्म रहेको छ । धारा १० देखि २२ सम्म संविधानको भाग २ रहेको छ, जसमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
भाग ३ मा मौलिक हक रहेको छ र यसको व्यवस्था धारा २३ देखि धारा ५५ सम्म रहेको छ ।
प्रस्तावित संविधानको धारा ५६ देखि धारा ७१ सम्म भाग ४ रहेको छ, जसमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व रहेको छ । भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई धारा ७२ देखि धारा ८४ सम्म राखिएको छ ।
धारा ८५ देखि धारा ९३ सम्म कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई भाग ७ मा राखिएको छ । संघीय संसदको व्यवस्था भाग ८ अन्तर्गत राखिएको छ, जसमा ९४ देखि १सय १८ धारा छुट्टाइएको छ ।
भाग ९ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि रहेको छ । धारा १ सय १९ देखि धारा १सय २३ मा यसलाई उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित संविधानको धारा १ सय २४ देखि १ सय ४१ सम्म रहेको संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीलाई भाग १० मा राखिएको छ । भाग ११ मा न्यायपालिका राखिएको छ । यसबारेमा धारा १ सय ४२ देखि धारा १ सय ७३ सम्म उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश कार्यपालिकालाई भाग १२ मा राखिएको छ । धारा १ सय ७४ देखि धारा १ सय ८५ सम्म यसको उल्लेख गरिएको छ । धारा १सय ८६ देखि धारा २ सय ६ सम्म प्रदेश व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख गरिएको छ । यसलाई भाग १३ अन्तर्गत राखिएको छ ।
भाग १४ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिलाई धारा २०७ देखि २ सय ११ सम्म उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक प्रणालीको व्यवस्था धारा २ सय १२ देखि २ सय २१ सम्म गरिएको छ भने यसलाई भाग १५ मा राखिएको छ ।
भाग १६ मा स्थानीय कार्यकारीणीको व्यवस्था गरिएको छ । धारा २ सय २२ देखि २ सय २८ सम्म यसको उल्लेख छ । स्थानीय स्वायत्त इकाइसम्बन्धी व्यवस्था धारा २ सय २९ र २ सय ३० मा गरिएको छ । यसलाई भाग १७ मा राखिएको छ ।
धारा २ सय ३१ देखि धारा २ सय ३७ सम्म भाग १८ अन्तर्गत संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाबीचको सम्बन्धलाई उल्लेख गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगको व्यवस्था धारा २ सय ३८ देखि धारा २ सय ४२ सम्म भाग १९ अन्तर्गत राखिएको छ । भाग २० मा निर्वाचन आयोग राखिएको छ, जसको उल्लेख धारा २ सय ४३ देखि २ सय ४६ सम्म गरिएको छ ।
मस्यौदाको भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राखिएको छ, जसको व्यवस्था धारा २ सय ४७ देखि २ सय ५० सम्म गरिएको छ ।
लेखा परीक्षण आयोगको व्यवस्था भाग २२ मा गरिएको छ, जसको उल्लेख धारा २ सय ५१ देखि २ सय ५४ सम्म रहेको छ ।
भाग २३ मा रहेको मानवअधिकार आयोगको विषयमा धारा २ सय ५५ देखि २ सय ५८ उल्लेख गरिएको छ । धारा २ सय ५९ देखि धारा २ सय ६४ सम्म भाग २४ अन्तर्गत महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २ सय ६५ देखि धारा २ सय ६७ सम्म राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोत आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई भाग २५ मा राखिएको छ । भाग २६ अन्तर्गत राखिएको दलित आयोगको व्यवस्थावारे धारा २ सय ६८ देखि २ सय ७३ सम्म उल्लेख गरिएको छ ।
धारा २ सय ७४ देखि धारा २ सय ७८ सम्म समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई भाग २७ मा राखिएको छ ।
महान्यायधिवक्ताको बारेमा भाग २८ मा उल्लेख गरिएको छ, जसको व्यवस्था धारा २ सय ७९ देखि २ सय ८२ मा गरिएको छ । धारा २ सय ८३ देखि धारा २ सय ८६ सम्म राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसको उल्लेख भाग २९ मा हुनेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था भाग ३० मा राखिएको छ भने यसको उल्लेख धारा २ सय ८७ देखि २सय ९० मा गरिएको छ । भाग ३१ अन्तर्गत संकटकालीन अधिकार रहेको छ, जसको व्यवस्था धारा २ सय ९१ मा गरिएको छ । भाग ३२ अन्तर्गत रहेको संविधान संशोधनको व्यवस्था धारा २ सय ९२ मा रहेको छ ।
धारा २ सय ९३ देखि धारा २ सय ९८ सम्म संक्रमणकालीन व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ, जसलाई भाग ३३ मा राखिएको छ ।
धारा २ सय ९९ देखि ३ सय ११ मा राखिएको विविध भाग ३४ मा परेको छ । भाग ३५ को संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजीको व्यवस्था धारा ३ सय १२ गरिएको छ ।
By जागरण मिडिया सेन्टर in समाचार on June 24, 2015 .
← निमन्त्रणा	राहत लिन लाइनमा बस्नुभएकी एक दलित महिलामाथि राजधानी काठमाडौंमै निर्घात कुटपिट । →